Izincazelo Nezinhlobo Zokukhiqiza Ividiyo | Martech Zone
Izincazelo Nezinhlobo Zokukhiqiza Ividiyo
NgoLwesine, Agasti 20, 2015 NgoLwesibili, Okthoba 6, 2015 Douglas Karr
Siphakathi nendawo komunye ukukhiqizwa kwamavidiyo njengoba ngibhala lokhu futhi ngibonile imiphumela emangalisayo evela ku amavidiyo asivele siwakhiqizile, sawabhalela, noma sawabelana ngawo. Le yi-infographic ephelele ngokumangalisayo ekwenzeni amavidiyo achazayo anikezela ngenqubo eqinile yokwakha amavidiyo aqhuba ukubandakanyeka nokuguqulwa.
Ngakho-ke, uyakha kanjani ividiyo echazayo ezokwandisa isilinganiso sakho sokuguqulwa? Ukuze sikusize, ngidale i-infographic ediliza inqubo yokwenziwa kwevidiyo echazayo ephelele. UNeil Patel, uQuicksprout.
Sabelane nge Ividiyo yokuchaza kumavidiyo wokuchaza ongafuna ukubheka kuyo. Futhi sabelane ngokumbalwa izibonelo zamavidiyo achazayo, yize le infographic evela kuQuicksprout inokuningi!
Uma ungathanda ukubona omunye umhlahlandlela uvuliwe Ukucaciswa Kwevidiyo, hlola iMcCoy Productions Umhlahlandlela Wokucaciswa Kokukhiqizwa Kwevidiyo.
Ukuphela kokuthuthuka engingakwenza kule infographic yilezi ukukhiqizwa kwamavidiyo izinyathelo ezichaziwe. Isinyathelo 2 yisikripthi futhi isinyathelo 3 sibhala ividiyo ekhanda. Angivumelani… futhi ngiphikelela ukuthi ngidwebe umdwebo wesigcawu ngasinye ngombhalo ofanele, bese ngiwubeka obondeni noma etafuleni, kunikeza isithombe esicace bha ngobulula nokushesha kwevidiyo echazayo. Bonke abaklami bamavidiyo esisebenze nabo bakunikeze lokhu futhi konga ithoni yesikhathi sokukhiqiza.
Ukube bekufanele sihambe siye ngapha nangapha kule vidiyo ethuthukile, kungenzeka ukuthi sichithe isikhathi kwizigcawu ezigqwayiza ezingeke zisetshenziswe, noma siphuthelwe ukukhiqizwa kwezigcawu ezidinga ukungezwa. Ngokufana nokukhishwa kohlelo lokusebenza konga isikhathi sokuthuthuka, ukukhishwa kwesigcawu kuzokusindisa umzamo omkhulu ekukhiqizeni kwakho ividiyo okucacisayo.
Tags: dala ividiyo echazayoividiyo echazayoukukhiqizwa kwamavidiyo
Izinto Ezi-4 Okufanele Ube Nazo Kuzo Zonke Izingxenye Zokuqukethwe
Ukuqonda Isizukulwane Sesidingo vs Isizukulwane Sokuhola